Hlalani emakhaya, kusho uMkhandlu – Sivubela intuthuko Newspaper
IMEYA yoMkhandlu weTheku, uKhansela Mxolisi Kaunda inxusa abahlali baseThekwini namaphethelo ukuba benze konke okusemandleni abo ngenhloso yokuqinisekisa ukuma kokusabalala mawala kokhuvethe iCorona olubonakala ludla fumuka ludla silaza ezindaweni ezakhelene naleli dolobha.
IMeya uKaunda yenze lesi sinxuso esimqoka kakhulu nje zibonakala zikhula mawala izibalo zabahaqekile esiFundazweni IKwaZulu Natal. Ngokusho kukaMeya uKaunda lesi yisikhathi sokuba bonke abantu basebenze ngokubambisana ngenhloso yokunqoba ubhubhane lweCorona olubonakala selugadla kakhulu kunakuqala eThekwini.
Ukhulume kakhulu ngokubaluleka kokuba kugcinwe yonke imiyalelo emqoka okuhloswe ngayo ukugwema ukubhebhetheka kwegciwane. Uthe ukholwa wukuthi uma kungasetshenziswana kahle namalunga omphakathi kungalula kakhulu ukuba kuliwe nalolu khuvethe eseligadle kwaze kwazika umnotho ezweni lonke kanjalo nasemhlabeni nje jikelele. Ngokusho kwakhe uma umphakathi ungagcina imiyalelo konke kungabonakala kuhamba kahle kakhulu.
Echaza uthe: “Sinxusa umphakathi ukuba uqaphele kakhulu manje kunakuqala. Okuyikhona okumqoka manje ukugcinwa kwemiyalelo ebekwe nguhulumeni. Lokho kuzosisiza thina sonke. Ukugcinwa kwemiyalelo kusho ukulwa ngempumelelo kule mpi esibhekena nayo.”
Ubalule nezindlela ezigunyazwe ngabeZempilo ezimqoka kakhulu zokubhekana nokhuvethe. Echaza uthe: “Ukuzivocavoca kanye nokudla ukudla okunempilo nsuku zonke ngezinye zezinto ezimqoka nesizigqugquzelayo kakhulu kulesi sikhathi esibucayi kangaka lapho khona igciwane elibonakala ligadla kakhulu. Nokuphuza amanzi anolamula afudumele nakho kuyanconywa kakhulu. Ngoba okuyikhona okumqoka kakhulu kulesi sikhathi samanje ukuba namasosha omzimba akwaziyo ukulwa nesifo ngempumelelo.”IMeya uKaunda iphinde yakhuluma ngoskhwini phambana nobhoko abayihlaba inhlali imiyalelo yomvalelandlini. Uthe labo bantu kumele kubhekwane nabo ngqo. Iziphulamthetho uthe yizona ezizoholela ekutheni kubonakale sengathi iyaphunza imizamo yesiFundazwe neyeDolobha yokulwa nokhuvethe. Ube esebafisela ukuba bawuphonse umbalane abantu baseThekwini okuyimanje basemitholampilo bahaqwe yiCorona
UBONGE AMANDLA EPHEPHANDABA
USUTHU LUFUNA UKUSAYINISA OWE-BUCS